“Waan ku faanayaa xirashada maaliyada kooxda Liverpool” – Virgil van Dijk – Gool FM
“Waan ku faanayaa xirashada maaliyada kooxda Liverpool” – Virgil van Dijk
(England) 28 Maajo 2019. Difaaca heerka caalami ee Virgil van Dijk ayaa wareysi ku bixiyay website-ka kooxda Liverpool, kahor kulanka finalka Champions League ay kula ciyaari doonaan Tottenham sabtida soo socota.
Virgil van Dijk ayaa ka hadlay xili ciyaareedkan kooxda Liverpool iyo sida ay ku gaartay finalka Champions League, iyo sidoo kale sababta uu ugu biiray Reds.
“Liverpool waa kooxdayda, waana ku faraxsanahay inaan xirto maaliyada maalin walba”.
“Waxaan u maleynayaa inay tani muhiim tahay, waxaan qabaa in ciyaartoydani ay yihiin kuwo gaar ah, ugu yaraan waa waxa aan dareemayo”.
“Waxaan rajeyneynaa inaan wadajir u joogno muddo 4 ama 5 sano ah oo aan ku guuleysano waxyaabo badan ee cajiib ah”.
Intaas kaddib Virgil van Dijk ayaa wuxuu ka hadlay kulamada ay ku ciyaarayaan banaanka tartanka Champions League wuxuuna yiri:
“Waxaan qabaa inay nagu adag tahay wax yaabaha qaar, waan xumeyn kulankii Napoli tusaale ahaan ee aan kula soo ciyaarnay banaanka”.
“Laakiin waxaan hagaajinay qaladaadkeena, kaddib markii ay yimaadeen kulankii ay nagula ciyaareen Anfield”.
“Kulankii Barcelona ma jirin qof naga tirsan ee ka war qabay qaabka aan ugu guuldareysanay 3-0, waxaan fariisanay qolka labiska, mana aaminsaneyn natiijada ay ciyaarta ku dhamaatay, goolka koowaad waxaa suuragal ah inaan si fiican u difaactamin, laakiin kan labaad iyo kan saddexaad, waxba ma qaban karin”.
Difaaca heerka caalami ee Virgil van Dijk ayaa wuxuu hadalkiisa kusoo xiray:
“Liverpool waa koox dhab ah, ma jiraan kooxo badan ee la mid ah, dadka ku hareeraysan ayaa neefsanaya, waana sababta aan halkan u imid, waxaan ku faraxsanahay inaan gaaray go’aankaas”.